Ihe mkpuchi FFP3
Mkpuchi ihu n95
Nwere ike Na - - Nkpuchi mkpuchi Mee Ghichaa
Ihe a na-ahụ anya na mkpofu ga-adị mma
You nwere Nkpuchi
Mask nwere Njikere Gị Dị Njikere
Etu ị ga-esi ahọrọ ihe nkpuchi sayensị
Etu esi eyi mkpu nwere ike ịkasi gị obi
Etu ị ga-eyi Egwu ịwa ahụ nke ọma
Ihe omuma nke nkpuchi nhicha na mmezi
Nkpachapụ anya maka mkpuchi
Needfọdụ chọrọ ịmata ọkọlọtọ nke mkpuchi
Apụghị ileghara ụfọdụ nsogbu anya mgbe ị na-ahọrọ nkpuchi!
Tipsfọdụ Ndụmọdụ Na Mpempe Surgicalwa Ahụ
Ihe eji eme onu ogugu iji gbute uzo na ihe ngosi ihe nka di nkpa
Isi ihe eji eme ihe kwa ubochi eji eme ihe
Nhọrọ nke oshọrọ na Buzụta Masks Na Ndụ Ahụ Kwa ụbọchị
Kedu uru ndị masks a na-ewepu n'ụlọ nwere?
Gịnị Bụ Ihe Ndị Na-ahụkarị
Kedu ihe bụ ịdọ aka na ntị maka ikpuchi mkpuchi
Kedu ihe bụ ụkpụrụ maka ihe masks
Ihe Ọrụ Nwere Ike Pụrụ Iche Na-eme Kwa Ndụ
site na nhazi na 20-03-31
Ugbu a mmetọ ikuku dị njọ karị, ọtụtụ ndị ọrụ ga-eyi mkpuchi, masks a na-atụfu bụ ndị ọrụ kachasị n'ahịa. 1. Ihe nkedo eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe di kwa nma, ya mere ojiji ndi enyi ndi nwere ihu masi nwekwara ike ihu ederede ederede ...
1. Ike na-egbochi arụmọrụ nke ikuku a na-egbochi arụmọrụ dị na ya na-egbochi arụmọrụ nke ezi uzuzu, ọkachasị aja mara mma n'okpuru 2.5 micron. N'ihi na umi a nwere ike ịbanye na alveoli, ahụike mmadụ kpatara ihe kachasị emetụta ya. Ndị na-ebugharị ahịhịa, mere ...
1. Yiri ihe nkpuchi n'oge oge oké ọrịa, n'oge anwụrụ na uzuzu, mgbe ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ gaa ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ. N'oge oyi, ndị agadi na-enweghị ọgwụ ọria, ndị ahụ na-arịa ọrịa na-aka eyi nke ọma mgbe ha na-apụ. 2. Imirikiti ndị nwere agba mara mma ...
Sook na mmiri ọ forụ forụ maka nkeji 5 Buru ụzọ bute ite nke mmiri esi wee wụsa ya na nnukwu efere ebe etinye ihe nkpuchi ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu efere rọba, a na-atụ aro ka esi mmiri a gbanye mmiri na mbụ, wee kpoo nkpuchi. Ọ bụrụ na enwere PramS seramiiki na-atụ aro ịkwanyere PramS seramiiki. Ghichaa seramiiki ...
1. Ihe nkpuchi na-ahụ maka ahụike N’akụkụ gboo083-2003 teknụzụ chọrọ maka ndị na - ebugharị ọgwụ, ihe ngosipụta teknụzụ dị mkpa gụnyere nrụpụta ọfụma na nguzogide ikuku nke ụmụ irighiri mmanụ: (1) arụmọrụ ọfụma: n’okpuru ikuku ikuku (85 ± 2) L / min, ihe nzacha e…
1. Ghichaa aka gi tupu itinye ihe nkpuchi. 2. Debe nkpuchi ahụ ihu gị: n'akụkụ agba nwere agba nke ihu ahụ na-eche ihu ma akụkụ nchara na-eche ihu; Mechie eriri ahụ na - eme ka ihe mkpuchi ahụ sie ike, ma ọ bụ kechie eriri roba nke nkpuchi ahụ na ntị ntị iji mee ka m ...
Ndị ọkachamara kwuru na mgbakwunye na inye nchebe dị mma, ikpuchi mkpuchi ga-atụlekwa nkasi obi nke onye na-ebu ya, ọ bụghị iweta ihe egwu ndu na mmetụta ndị ọzọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, arụmọrụ dị elu nke nchebe nkpuchi, na-enwe mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ nkasi obi. W ...
Thekpụrụ bụ isi ihe ngosipụta teknụzụ dabere na njirimara ngwaahịa, GB / T 32610-2016 nkọwapụta teknụzụ maka nkpuchi nchebe kwa ụbọchị, na-ejikọ GB2626-2006 “gbochie ụdị nzacha nke iku ume nke onwe”, GB19083-2010 A ...
Ihe nkpuchi ahụ ịwa ahụ. Dabere na YY, 0469-2004 “masks ịwa ahụ ọgwụ, ihe ndị a chọrọ nka, nkọwa nke ndị na-ahụ maka ịwa ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ na mgbaaka gburugburu ebe a na-arụ ọrụ, maka na ndị ọrịa na-eme ọgwụgwọ na ntinye na ntinye nke ...
Ndị a na-akpọkarị maski gụnyere KN95, N95, masks ịwa ahụ, wdg Nke mbụ bụ nkpuchi KN95. Dabere na nhazi ọkwa mba 2626-2006 “Nkube onwe onye na - egbochi ihe ndị na - eku ume iku ume”
YY 0469-2004 chọrọ teknụzụ maka ịwa ahụ maka ọgwụ ike ka ndị ọchịchị ọgwụ na nri nri dị ka ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ ọgwụ wee mejupụta ya na Jenụwarị 1, 2005. standardkpụrụ a na-akọwapụta usoro ọrụ chọrọ, ụzọ nyocha, akara na ntuziaka maka ojiji, ...
Ugbu a, isi ihe gụnyere GB 2626-2006 banyere ikpuchi ihe na-echebe iku ume onwe ya priming na-egbochi ihe ngosipụta iku ume ụdị ", GB 19083-2010" chọrọ teknụzụ ọgwụ chọrọ ọgwụ ", YY, 0469-2004“ ọgwụ ịwa ahụ masị teknụzụ chọrọ. ..
Quanzhou Tianli Nchedo Nmepụta Ihe Co., Ltd. (SSP) hiwere na afọ 2010, dị na Quanzhou City, Fengze
Owuwu Lanhujun, Anji Road, Fengze, Quanzhou, Fujian, China
© nwebisiinka - 2010-2021: Edebere ikikere nile.